काँग्रेसमा मुख्य मन्त्रीको दावेदार को–को ? - Dna Nepal
काँग्रेसमा मुख्य मन्त्रीको दावेदार को–को ?
४ आश्विन २०७४, बुधबार १५:१२
काठमाण्डौं, असोज ४ ।
नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर आसन्न प्रदेशसभा चुनावमा जाने बहस सुरु भएको छ । युवा नेताहरुले आफूलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।प्रमुख विपक्षी एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र योगेश भट्टराईसहितका नेतालाई सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।
यससँगै कांग्रेसमा पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका नाममा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । यद्यपि औपचारिक रुपमा भने कसैले पनि मुख खोलेका छैनन् । स्रोतका अनुसार युवा नेता गगन थापाले प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार दाबी गरेका छन् ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का निर्वाचित सांसद हुन् । तर, मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुने शर्तमा उनी प्रदेशसभामा जान तयार भएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जानुपर्ने र आफू ३ नम्बर प्रदेशको दाबेदार भएको सन्देश पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पुर्याएका छन् ।
स्थानीय चुनावको मतलाई हेर्दा प्रदेश ३ मा कांग्रेसले एमालेले भन्दा एक लाख कम भोट पाएको छ । तर, संविधानसभामा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी रहेको र मेहनत गर्ने हो भने प्रदेश ३ मा फेरि पहिलो पार्टी हुनसक्ने गगनको विश्लेषण छ । प्रदेश १ मा विश्वप्रकाश शर्मालाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा उनी पराजित भएका थिए । तर, १३ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएका उनी प्रदेश १ का चर्चित युवा अनुहार हुन् ।
प्रदेश २ मा स्थानीय तहको चुनाव भइरहेकाले मुख्यमन्त्रीको दाबेदारबारे खासै छलफल भएको छैन । तर, केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना, फर्मुल्लाह मन्सुर, महेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुलाई सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । प्रदेश ४ मा धनराज गुरुङ, शंकर भण्डारी, ध्रुव वाग्ले लगायतको युवा नेताहरुको नाम चर्चामा छ । स्थानीय तहको मत परिणामलाई हेर्दा प्रदेश ४ कांग्रेसका लागि अनुकुल प्रदेश हो ।
प्रदेश ५ का लागि कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका मुख्य दावेदार बालकृष्ण खाँड हुन् । यहाँ पनि प्रदेश २ मा जस्तै त्रिशंकुस प्रदेश सभा बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । रुपन्देही ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद खाँड मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुने गरी प्रदेशमा जान तयार देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री समेत रहेका खाँडले अनौपचारिक छलफल समेत थालेका छन् ।
प्रदेश ६ मा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । तर, सुर्खेतका हृदयराम थानीलाई पनि सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा यो प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले झण्डै बराबर स्थानीय तह जितेका छन् । प्रदेश ७ मा रमेश लेखक सम्भावित उम्मेदवार हुन् । उनी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न तयार हुँदा पार्टी्भित्र सर्वसम्मत हुनेछन् । तर, केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका उनी प्रदेशमा जाने नजाने निश्चित छैन ।
उनको विकल्प रुपमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायर हुन सक्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । यो प्रदेश कांग्रेस बलियो भएको प्रदेश मानिन्छ । तर, स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले भने केही धेरै मात्र मात्र पाएको छ ।